OST Fitaovana fanamarinana ny fahamendrehana. Notarafinaost.
Home Products DataNumen Exchange Recovery OST Fitaovana fanamarinana ny fahamendrehana (Scanost)
OST Fitaovana fanamarinana ny fahamendrehana (Scanost)
About OST Fitaovana fanamarinana ny fahamendrehana (Scanost):
Manome i Microsoft OST Fitaovana Integrity Check, antsoina koa hoe scanost, izay azo ampiasaina hanamarinana sy hamahana ireo lesoka ao an-toerana OST rakitra rehefa sendra lesoka ianao amin'ny fampifanarahana ny OST fisie miaraka amin'ny mpizara Exchange. Notarafinaost hampitaha ny angona misy eo an-toerana OST fisie sy ny mpizara Exchange, mitadiava tsy fitoviana sy hadisoana ary avy eo manandrana manamboatra azy ireo. Notarafinaost napetraka miaraka amin'i Outlook. Azonao atao ny mitady “scanost.exe ”ao amin'ny solosainao eo an-toerana haka izany.
DataNumen Exchange Recovery Tsara lavitra noho ny scanost:
Na scanost Mety hanampy amin'ny fanitsiana ny tsy fitoviana sy ny lesoka ao OST raki-daza, DataNumen Exchange Recovery tsara kokoa noho ny:
Scanost tsy afaka mamaha lesoka kely momba ny fampitahana kely fotsiny. raha DataNumen Exchange Recovery afaka mamerina tsy ny lesoka madinidinika ihany, fa ny lesoka mafy indrindra amin'ny fampifanarahana.
Scanost handà tsy hiasa, raha maty ny mpizara Exchange, tsy misy ny boaty mailaka amin'ny mpizara, na tsy afaka mifandray amin'ny mpizara ny solosaina eo an-toerana. raha DataNumen Exchange Recovery hiasa tsara raha tsy misy ireo teritery ireo.
Hafa noho ny lesoka fampifanarahana, scanost tsy afaka manao na inona na inona amin'ny hafa OST lesoka sy olana amin'ny fisie. raha DataNumen Exchange Recovery afaka mamaha olana maro hafa amin'ny Outlook sy Exchange. Ohatra, afaka sitrana maloto OST raki-daza, niova fo OST fisie ao anaty rakitra PST, hamaha 2GB be loatra OST olan'ny rakitra, sitrana ireo zavatra voafafa ao amin'ny boaty mailaka Exchange, sy ny sisa.
Raha fintinina, DataNumen Exchange Recovery tsara lavitra noho ny scanost. Isaky ny sendra olana na lesoka ianao OST rakitra, tokony hampiasainao DataNumen Exchange Recovery hamahana azy.